1 taona 7 volana lasa izay #876 by aadschouten
Ny kodiarana nosy tsy mandeha miasa, hitako fa miasa ny cylinders miasa, fa ny fivorian-kodiarana amin'ny orona dia mijanona eo afovoany.
inona no olana ??? Heveriko fa ny olana dia ao amin'ny MDL.
1 taona 7 volana lasa izay - 1 taona 7 volana lasa izay #898 by Josh13215
Ny kodiaran-kerim-borona dia miasa ho ahy saingy ny môtera dia midadasika toy ny eny an-dalamby.
Last edit: 1 taona 7 volana lasa izay Josh13215.